Ubuntu is really HOT!! - MYSTERY ZILLION
Ubuntu is really HOT!!
ကျွန်တော် Window နှင့် Ubuntu ကို တင်ထားပါတယ်။ ရိုးရိုး window ကို သုံးရင် စက်က ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့၊ Ubuntu သုံးရင် သိသိသာသာ ပူလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲမသိဘူး။ Ubuntu က CPU ပိုစားလို့လား။
compiz ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကုန်တာကောဘယ်လိုနေလဲမသိ ???
အရမ်းကို မြန်တယ်။ compiz မသွင်းထားဘူး။